Mustaqbalka UNWTO ee Sacuudi Carabiya iyo Isbaanishka: Maalinta Cusub ee Dalxiiska Adduunka ee Midaysan ayaa ka bilaabmay FII
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Mustaqbalka UNWTO ee Sacuudi Carabiya iyo Isbaanishka: Maalinta Cusub ee Dalxiiska Adduunka ee Midaysan ayaa ka bilaabmay FII
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Shirarka • News • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Spain • Daalacanayo Hadda • Wtn
Soo kabashada dalxiisku waxay qaadan doontaa wakhti iyo dadaal isku xidhan. Waxay qaadan doontaa wada shaqayn caalami ah iyo ururo dhinacyo badan leh oo awood leh. Maanta waxaa miiska wada-hadalka la yimid Sacuudiga iyo Spain heshiis laga yaabo inuu qaabeeyo mustaqbalka dalxiiska iyo UNWTO.
Sacuudi Carabiya iyo Isbaanishka waxay ku biiraan xoogaga dib u habeynta dalxiiska ka dib COVID oo ay ku jirto UNWTO.
Mudane Axmed Al Khateeb – Wasiirka Dalxiiska ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
HE Maria Reyes Maroto – Wasiirka Warshadaha, Ganacsiga iyo Dalxiiska, Boqortooyada Spain.
The Hindisaha Maalgelinta Mustaqbalka (FII) Sacuudiga ayaa maanta ka dhacay 6,000 oo hogaamiye maaliyadeed ah.
Machadka FII waa aasaas caalami ah oo aan faa'iido doon ahayn oo leh cudud maalgashi iyo hal ajande: Saamaynta Bani'aadamnimada. Ka go'an mabaadi'da ESG, waxay kobcisaa maskaxda ugu ifaysa waxayna u beddeshaa fikradaha xalalka dhabta ah ee aduunka ee meelaha 5: AI iyo Robotics, Waxbarashada, Daryeelka Caafimaadka, iyo Joogitaanka.
Markii ugu horeysay abid, socdaalka iyo dalxiisku waxay ahayd mid kale oo diiradda la saaray waxayna door weyn ka qaadatay shirkan caalamiga ah ee Sacuudi Carabiya. 150 ka mid ah madaxda ugu saraysa dhinaca socdaalka iyo dalxiiska ayaa ka soo qayb galay, oo ay ku jiraan in ka badan 10 wasiir oo fadhiyey.
UNWTO waxay lumisay kalsoonida iyo muhiimadda tan iyo 2018. Iyadoo Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvil uu ku martigeliyay xafladdiisa Barcelona si ula kac ah isla maalintaas iyo ka qaybqaadashada daciifka ah, hoggaamiyeyaasha Sacuudi Carabiya ayaa isugu yimid si ay u qaabeeyaan mustaqbalka UNWTO.
Natiijadu waxay noqotay heshiis ku saabsan Saudi Arabia iyo Spain ku biirista ciidamada si dib loogu habeeyo dalxiiska ka dib COVID oo ay ku jirto UNWTO.
Heshiiskan waxaa saxiixay Mudane Axmed Al Khateeb ee Sucuudiga iyo HE Maria Reyes Maroto ee Spain. UNWTO waxay xarunteedu tahay Madrid. Heshiiskan ayaa sidoo kale soo afjaraya xanta ku saabsan Sacuudiga oo doonaya in xarunta UNWTO loo wareejiyo Riyadh. Sacuudi Carabiya hadda waa hal koox oo diyaar u ah inay hoggaanka u qabato si ay u qaabeeyaan mustaqbalka dalxiiska adduunka iyo ururka ka dambeeya - UNWTO.
Bayaanka wadajirka ah ee Sacuudiga iyo Spain
1. Waxaan maanta yeelanay kulan shaqo oo aad u wanaagsan oo ku saabsan soohdinta Hindisaha Maalgelinta Mustaqbalka ee Riyadh, halkaas oo aan ku ogaannay dhowr arrimood oo Spain iyo Sacuudi Carabiya ay ka ciyaari karaan door hoggaamineed si loo soo nooleeyo waaxda dalxiiska kadib masiibada, si ay u noqoto mid ka mid ah tiirarka soo kabashada dhaqaalaha adduunka. Waaxda dalxiisku waxay u baahan tahay hoggaan adag iyo iskudubarid si ay isu keento dawladaha iyo la-hawlgalayaasha ganacsiga gaarka ah si ay u wada shaqeeyaan si wada jir ah. Waxaan u baahanahay inaan dhisno waax dalxiis oo adkeysi leh, waara, oo loo dhan yahay oo bixisa barwaaqo mustaqbalka fog.
2. Sacuudi Carabiya waxay leedahay, welina waxay ka ciyaareysaa doorka hoggaamineed ee isku-dubbaridka caalamiga ah ee qaybta, oo ay ugu horreyso hoggaanka G20 ee 2020. Boqortooyadu waxay ku dhistay arrintan dhowr hindise oo muhiim ah oo ay ka mid tahay $ 100 milyan oo deeq ah oo loogu talagalay adduunka. Bank for the Tourism Community Initiative, barnaamijka Tuulooyinka ugu Fiican, oo ay iskaashanayaan UNWTO, oo hadda ah Xarunta Caalamiga ah ee Dalxiiska Sustainable. Sacuudi Carabiya waxay la shaqaynaysay saaxiibada caalamiga ah si ay u dhisto barnaamij ujeedadiisu tahay in dib u habeyn lagu sameeyo mustaqbalka dalxiiska iyo wax ka qabashada caqabadaha hoose ee soo wajaha warshadaha.
3. Intii lagu jiray xiisadda COVID, Spain waxay safka hore kaga jirtay dadaallada caalamiga ah ee lagu soo celinayo dhaqdhaqaaqa iyadoo hore u qaadatay Shahaadada COVID Digital ee EU. Spain waa dalka labaad ee loogu booqashada badan yahay adduunka, isagoo helay 83.7 milyan oo booqasho caalami ah sanadka 2019. Waxa ay caan ku tahay meelaha ay ku socoto iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo shirkadaha dalxiiska ee heer caalami. Spain waa hormuudka dalxiiska adduunka, waa xubin aas aastay hay’adda UNWTO, waxayna hadda maalgelinaysaa dhisme cusub oo xarun u ah ururka.
4. Labada dal waxay ku heshiiyeen inay sii xoojiyaan iskaashigooda saddex arrimood oo muhiim ah si loo horumariyo dalxiiska: kow, kor u qaadida waarta, taas oo noqon doonta lagama maarmaan si loo dammaanad qaado jiritaankeeda mustaqbalka ee qaybta koritaanka iyo ka qayb qaadashada dhaqaalaha caalamiga ah ee kaarboonaysan, iyo xoojinta isdhexgalka bulshada ee martida loo yahay. bulshooyinka. Marka labaad, ka wada shaqaynta isbeddelka dhijitaalka ah, dhisidda meelo caqli badan oo isku xidhan, hagaajinta socodka iyo is-dhaafsiga macluumaadka iyo fikradaha si loo dardargeliyo isbeddelka qaybta dalxiiska. Seddexaad, Spain iyo Saudi Arabia waxay ka wada shaqayn doonaan kor u qaadida iyo horumarinta tababbarka ilaha shaqaalaha si loo xoojiyo awooda dadka ka shaqeeya qaybtan, laga bilaabo tababarka xirfadaha ilaa waxbarashada qalin-jabinta iyo takhasuska.
5. Dalxiiska waa qayb caalami ah oo muhiim ah. Heshiiska maanta ayaa xaqiijin doona in laba ka mid ah hoggaamiyeyaasha waaxdu ay si dhow uga wada shaqeyn doonaan faa'iidada dhammaan kuwa ku tiirsan.